Inta Aadan Qaadan Go’aanka Furiinka Ugu Horeen Jawaab u Hel 6 Su’aal oo Ku Horyaal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Inta Aadan Qaadan Go’aanka Furiinka Ugu Horeen Jawaab u Hel 6 Su’aal oo Ku Horyaal
Muqdisho ( mareeg News ) Furiinku waa go,aan qaadasho adag oo ku timaada dareen xoogan oo la xakameyn waayay. taa oo sababta in guri dhisnaa uu dumo, waana fal dib u noqosho ku keena labada ruux ee is furay mana jirto guul uu keeno furiinka ilaa ay jirto sabab macquul ah oo la wada arki karo.
Haddii jawaabtaadu tahay ” MAYA ” xaaladaha aan dhiiragelinta laheyn ee ku yimaada furiinka waa badan tahay mana ah kuwa caafimaad qaba.
haddii aad marka caqabad timaado aad u aragto furiinka fursad adigoo niyadda iska leh waxaad heleysaa qof aad ku faraxsan tahay ogow gabadh kastaa waxey leedahay iinteeda.
Akhri:-Xildhibaanada Golaha Shacabka Oo Fasax Galay